Xero sy Zeevou | Zeevou Integrations
Xero sy Zeevou fampidirana
Midira ao amin'ny Xero
Midira ao amin'i Zeevou
Ataovy mandeha automatik ny fandefasana vola miditra
Ataovy mandeha ho azy ny fandefasana ny fandaniana
Ataovy mandeha ho azy ny fandefasana faktiora
Tsory ny fampihavanana
Momba an'i Xero
Xero dia lozisialy fitantanana kaonty an-tserasera manerantany natsangana ho an'ny orinasa kely.
Makà fomba fijery tena izy amin'ny volanao. Midira amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza ao amin'ny Mac, PC anao, takelaka findainao hahitana fotoana tena izy momba ny fikoriananao. Izy io dia lozisialy fitantanana kaonty orinasa tsotra, tsotra ary majika indraindray.
Ataovy eny am-pandehanana ny orinasanao. Ampiasao ny fampiharana finday anay hampifanarahana, handefasana faktiora, na hamoronana fitakiana fandaniana - na aiza na aiza.
Mahazo karama haingana kokoa amin'ny faktiora amin'ny Internet. Mandefasa faktiora amin'ny Internet ho an'ny mpanjifanao - ary havaozy rehefa nosokafana izy ireo.
Mifanaraka amin'ny segondra. Xero dia manafatra sy manasokajy ny fifanakalozana banky farany nataonao. Tsindrio fotsiny ok raha hihavanana.
Mikaroha bebe kokoa na andramo maimaimpoana ny lozisialy Xero Accounting.
Momba an'i Zeevou
Zeevou dia sehatra an-tserasera mora ampiasaina izay manodina ny fitantanana fandraisam-bahiny - manomboka amin'ny marketing, ka hatramin'ny famandrihana, hatramin'ny asa.
Makà tranonkala SEO-friendly ho an'ny Famandrihana mivantana, ary alao lisitra ao amin'ny sehatra famandrihana mivantana tsy misy komisiona ny fanananao Zeevou Direct.
Mifandraisa amina fantsona 200 mahery toa ny Airbnb, Agoda, Booking.com, Expedia ary maro hafa hanampiana amin'ny fampitomboana ny haavon'ny toeram-ponenanao.
Hamarino fa ny famandrihana rehetra dia voahodina tsara amin'ny alàlan'ny fizotran'ny famandrihana 5-dingana malaza momba an'i Zeevou.
Ataovy mandeha ho azy ny orinasanao - manomboka amin'ny fifandraisana, hatramin'ny fikarakarana trano, fikojakojana, tatitra momba ny vola ary fitantanana mpiasa.
Ahoana ny fomba fampifandraisana
Rehefa avy nanao sonia an'i Zeevou ianao dia hahita dingana amin'ny antsipiriany momba ny fomba hifandraisanao amin'ny Zeevou Know. Lisitra fanamarihana fampidirana (fampifangaroana angona roa):
Ampidiro ny tabilaon'ny kaonty avy any Xero mankany Zeevou
Manafatra hetra avy any Xero ka hatrany Zeevou
Manafatra sokajy fanaraha-maso avy any Xero mankany Zeevou
Atolory ireo vahiny ao Zeevou ho fifandraisana amin'i Xero
Mandrosoa ny faktiora famandrihana avy any Zeevou mankany Xero
Atosory ny faktiora manampy avy any Zeevou mankany Xero
Atolory ny faktiora fampirimana fiarovana avy any Zeevou mankany Xero
Alefaso ny antsipirian'ny kaomisiona OTA sy ny vidin'ny fifanakalozana avy any Zeevou mankany Xero
misoratra anarana amin'i Xero